I-Boeing 737 MAX icinywe ukubhabha kwindawo yomoya yaseIndiya kwakhona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Boeing 737 MAX icinywe ukubhabha kwindawo yomoya yaseIndiya kwakhona
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 26, 2021
Ukuza kuthi ga ngoku, i-175 kumazwe ayi-195 isusile izithintelo kuMax, kwaye ngaphezulu kwe-30 abaqhubi babuyisele inqwelomoya kwinkonzo.
Umlawuli wase-India wezokulawulwa kweenqwelomoya u-Boeing 737 MAX jets.
I-SpiceJet ilindele ukuqala ukusebenza kwe-Boeing 737 MAX kwinyanga ezayo.
I-India ixhase iijets ezingama-737 MAX ngo-Matshi 13, 2019.
Umlawuli we-India wokuhamba ngenqwelomoya uvakalise namhlanje ukuba iinqwelomoya ze-Boeing 737 MAX zivunyelwe ukuba ziphinde zisebenze kwindawo yomoya yaseIndiya.
Zonke iijethi ze-Boeing 737 MAX zazingqinisiswe kwihlabathi liphela ngo-Matshi 2019 emva kwengozi ezimbini kwisithuba seenyanga ezintlanu.
I-Indiya izivalile zonke iinqwelomoya ze-MAX ukuba zibhabhe ziye, ukusuka, ngaphakathi nangaphezulu kwe-airpace yaseIndiya ngoMatshi 13, 2019.
Kutshanje, ezi nqwelomoya zavunyelwa ukuba ziphinde ziphinde ziphinde zilawule ukubhabha kwezomthetho e-US, e-EU, e-UAE nakwamanye amazwe-emva kokwenza uhlengahlengiso olufunekayo kunye nokwenza uhlaziyo lwezixhobo zekhompyuter kunye nokuhlaziywa kwesoftware kukhuseleko.
I-SpiceJet Ltd yase-India ithe ngolwe-Lwesine ilindele ukuba iBoeing Co ixhase i-737 MAX jets kwizithuthi zayo ukubuyela kwinkonzo ekupheleni kukaSeptemba emva kwesivumelwano esabethwa ngumqeshi u-Avolon kuqeshiso lwenqwelomoya.
SpiceJet - ekuphela komntu ophethe i-India nge-B737 Max e-India- wangena kwisivumelwano no-Avolon, oyena mntu ubabolekisa kakhulu ngenqwelomoya ye-MAX, evula indlela yenqwelomoya yenqwelomoya ye-737 MAX ukuqala ukubuyela kwinkonzo… ngasekupheleni kukaSeptemba 2021, kwemvume. ”
Lilonke, bekukho iinqwelomoya ezilishumi elinesibhozo ze-Boeing 737 Max eIndiya- ezintlanu zangaphambili zeJet kunye ne-13 zeSpiceJet- ngexesha lokusekwa.
Utyalo-mali wase-Indiya usozimali u-Rakesh Jhunjhunwala naye uceba ukusungula inqwelomoya entsha enexabiso eliphantsi ekuqaleni konyaka olandelayo ngenqanawa ye-B737 Max. I-Ex-Jet Max ikhutshelwe ngaphandle ngabancinci.
ENdiya ICandelo loMlawuli wezoKhenketho loLuntu (DGCA) Inkosi u-Arun Kumar ukhuphe i-odolo yokurhoxisa isiseko sika-Matshi 2019 se-B737-8 / 9 MAX namhlanje.
"Oku kuhlangulwa kwenza ukuba ukusebenza kweBoeing Company Model 737-8 kunye neBoeing Company Model 737-9 (MAX) zeenqwelo moya kuphela emva kokoneliseka kweemfuno ezifanelekileyo zokubuyela kwinkonzo," utshilo uKumar.
Kwangoko ngo-Epreli, i-DGCA yayivumele inqwelomoya ebhaliswe kwilizwe langaphandle iBoeing 737 Max eyayibekwe eIndiya ukuba iphume ngaphandle kwelizwe. Ikwavumile ukugqithisa ngaphezulu kukaMax oguqulweyo kwisithuba somoya saseIndiya.
Ukulandela oku, ezinye iinqwelomoya ezibhaliswe kumazwe angaphandle ezibekwe kwizikhululo zeenqwelomoya ezahlukeneyo eIndiya zikwazile ukwenza iRTS.
Kwingxelo, uBoeing uthe: "Isigqibo se-DGCA sisiganeko esibalulekileyo ekubuyiseleni ngokukhuselekileyo i-737 MAX kwinkonzo e-India. I-Boeing iyaqhubeka nokusebenza nabalawuli kunye nabathengi bethu ukubuyisela inqwelomoya kwinkonzo kwihlabathi liphela. ”
Iqela leenqwelomoya ze-LATAM Ngoku IiFayile zeSicwangciso soHlengahlengiso...
IINKCUKACHA-19 izinja ezivuthayo eziza kwisikhululo senqwelomoya saseMiami
Uphononongo loMhlaza weBone Marrow ngoku Lwandisiweyo
I-British Airways: Akusekho manenekazi namanenekazi
IVeki yeFashoni yaseSeychelles kwispotlight
IJamani ngoku ifumana incasa yeSeychelles kuQala...
Intliziyo yeNkqubo yokuFunda ye-IMEX yaseMelika
I-Wellbeing Magazine ibonisa uKen Kladouris
Inkwenkwezi ye-chess yaseGeorgia imangalela iNetflix ngokumbiza ...
I-Indo-German Chamber of Commerce Yazisa ...
ISingapore neIndiya Zifikelela kwiSivumelwano esitsha kwiiNqwelomoya
IParade yeKrisimesi iba sisiganeko sokwenzakala kwabantu abaninzi...
I-Sunny Seychelles Yamkela uBuyela ngenqwelomoya eNtsha yaseFrance
Itshizi entsha yasimahla yobisi: iMicroalgae yokuqala esekwe
I-Hawaii COVID-19 yeNqanaba loMngcipheko ukusuka ePhakamileyo ukuya kuPhakathi
Kukhula ukudideka ngenxa yezithintelo zokuhamba
IJamaica ibeka iMiqathango emitsha yokuHamba kwiAfrika...
Ubucwebe obutsha obuNtofontofo kunye nokuQaliswa kweBrand SABOTEUR
Itheko likaMarx, uLenin kunye noHo Chi Minh kwiEngels ...
I-Bahamas inyula I. Chester Cooper njengo-Mphathiswa omtsha ...
UkuTwitter lilungelo lomntu-naseNigeria
Ichiza le-Antiviral Oselavir® liyafumaneka ngoku
Abazimasi be-IMEX baseMelika benza uMbaleko weNtlalontle
IRashiya yongeza i-Italiya entsha, iVietnam, iAzerbaijan, iKyrgyzstan...
Ulwakha njani uKhenketho ngezepolitiki. Umnqophiso ...
Inqwelomoya entsha isuka eSan Jose isiya ePalm Springs eAlaska...
Umlingo waseKenya wamaQhawe oKhenketho amatsha eWTM eLondon ngo...
Akukho bungozi: Inyikima enamandla inyikima iGrisi ...
Yenza imali ngokuBukela iividiyo ngale App
IFransi ibhengeza iseti entsha yezithintelo ze-COVID-19